Fandaharana sidina vaovaon'ny South African Airlines: Fanovana, fanampiny ary fanafoanana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Fandaharana sidina vaovaon'ny South African Airlines: Fanovana, fanampiny ary fanafoanana
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Ghana • Vaovao Mafana Maorisy • Vaovao • Vaovao Mafana Nizeria • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo
AIrways Afrikana Tatsimo
South African Airlines no fahatelo Star Alliance Carrier any Afrika, miaraka amin'ny Egypt Air sy Ethiopian Airlines. Ny zotram-piaramanidina androany dia manambara fiovana ao anatin'ny tambajotra Afrikana anatiny.
Taorian'ny fanombanana tsara ny habetsahan'ny mpandeha, ny SAA dia manitsy ny fandaharam-potoan'ny sidina mba handraisana ny fepetra takian'ny mpandeha.
Ny zotram-piaramanidina dia hanaisotra amin'ny fandaharam-potoana ny serivisy fiverenana isan'andro any Maputo any Mozambika. Manan-kery manomboka ny 1 desambra 2021 ny fanapahan-kevitra, ary ireo mpandeha mitazona tapakila dia horaisina amin'ny sidina codeshare tantanin'ny Mozambique Airlines, TM (LAM).
Simon Newton-Smith, Mpanatanteraka Interim Executive Commercial SAA, dia nilaza hoe: “Rehefa nanomboka niasa indray ny SAA tamin'ny faran'ny volana septambra, dia nanolo-tena hanara-maso tsy tapaka ny habetsahan'ny mpandeha sy ny vola miditra amin'ny lalana rehetra izahay. Ny fitakiana amin’ity tolotra ity dia tsy mahafeno ny nantenaina ary amin’izao fotoana izao dia mifanaraka amin’ny paikadin’ny fitantanana mangarahara sy tompon’andraikitra ara-bola izao fanovana izao.
Nilaza i Newton-Smith fa nampahery ny fandehanana tamin'ny lalana roa vaovao, mankany Lagos any Nizeria sy Maorisy ary dinihina ihany koa ny serivisy vaovao mankany amin'ny toerana hafa amin'ny taona 2022.
Ny fanitsiana hafa natao ho an'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra Desambra '21 sy Janoary '22, dia noho ny fitakiana miadana amin'ny andro tsy fandehanana mahazatra, satria mandany ny fotoanany miaraka amin'ny fianakaviana sy namana ny mpanjifa.
Ny sidina miverina mankany Accra any Ghana dia novana ary tsy hiasa amin'ny 25 Desambra 2021 sy 1 Janoary 2022. Ny sidina Kinshasa, DRC dia nasiam-panitsiana ary tsy hiasa amin'ny 24 Desambra 2021 sy 31 Desambra 2021. misy sidina SAA.
Ny SAA dia niasa 4 andro isan-kerinandro nankany Lusaka nanomboka tamin'ny Septambra ka hatramin'ny 30 Novambra 2021. Ny SAA dia nanomana fampandehanana fanampiny hanidina 7 andro isan-kerinandro nanomboka tamin'ny Desambra, saingy nisy fanitsiana fanampiny natao tamin'ny fandaharam-potoana hiasa 5 andro isan-kerinandro nanomboka ny 1 Desambra. Ireo mpandeha voakasik'izany dia hapetraka amin'ny sidina SAA manaraka.
Nanamarika i Newton-Smith, “Tsy misy zotram-piaramanidina tia manafoana sidina fa manolo-tena amin'ny fahombiazana sy ny faharetan'ny zotram-piaramanidinay izahay, raha mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifanay. Miala tsiny amin'ny mpanjifa izahay amin'ny fanelingelenana rehetra ary ny fanampiana feno dia homena ny mpanjifa rehetra mitazona tapakila SAA amin'ny sidina izay nesorina tamin'ny fandaharam-potoana.
Ny mpanjifa dia tokony hiantso ny biraon'ny famoahana ho fanampiana. " Ireo mpandeha izay tsy te-hivezivezy intsony dia afaka manafoana ny famandrihana azy ary afaka mahazo famerenam-bola feno (anisan'izany ny hetra) na misafidy ny voucher crédit izay hatolotra amin'ny endrika fandoavam-bola voalohany.
Nilaza i Newton-Smith fa tokony hifandray mivantana amin'izy ireo ny mpanjifa izay namandrika tamin'ny alalan'ny agence de voyage ary raha nentina an-tserasera na tamin'ny alalan'ny foiben'ny fiantsoana SAA ny mpanjifa dia afaka mifandray amin'ny SAA Trade Support amin'ny alàlan'ny mailaka. [email voaaro] Tokony hifandray amin'ny biraon'ny SAA eo an-toerana ny mpanjifa izay namandrika tamin'ny foibe fiantsoana SAA any ampitan-dranomasina.